အမေရိကရဲ့ အကောင်းဆုံး Brand များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » History » အမေရိကရဲ့ အကောင်းဆုံး Brand များ
Posted by kai on Aug 16, 2010 in History, News, Opinions & Discussion | 1 comment
American History The Greatest Brands
သတင်းဆောင်းပါးလေး ဒီအတိုင်းပဲကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တချိန်ချိန်တော့ မြန်မာပြည်ရဲ့အကောင်းဆုံး တံဆိပ်တွေကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်နိုင်မယ် မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ကြက်ဆင်တံဆိပ်ဖဲထီးတို့။ ရွှေကျီးနိုင်လွန်တို့။ မောင့်ကြက်သရေခေါင်းပေါင်းတို့ ၊ နိုင်ငံခြားကလာဖွင့်တဲ့ ရိုးကုန်တိုက်တို့၊ ဆေးဝယ်ရင်စိတ်ချရတယ်ဆိုတဲ့ ဒီဇူစာတို့…စသဖြင့်ပေါ့။ မြန်မာပြည်ဟာ ၁၉၆၂ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းအုပ်ချုပ်ပြီးသကာလ အားလုံးတရားဝင်လေးဖြစ်သွားအောင် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီက မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန်နဲ့ ချီတက်ပေးလိုက်တာမို့ အကုန်လုံးကတော့အခုအချိန်မှာ အမြစ်တောင်မကျန်ပြုတ်ကုန်ပါပြီ။ ရှေးရှေးတုံးကပေါ့နော်.။အဲဒါတွေ မှတ်မိသူတွေ ချရေးပေးကြပါဦး..။
ဒီနေ့မှာပဲ တရုတ်ပြည်စီးပွားရေးဟာ ကမ်ဘာ့ဒုတိယနေရာရောက်လာတဲ့အကြောင်း သတင်းဖတ်လိုက်ရတယ်။ ၂၀၃၀မှာ အမေရိကကျော်နိုင်တယ်လည်း ဆိုကြလေရဲ့။
နောက်တော့သတင်းထဲ အလွမ်းပြေ ဒီတံဆိပ်လေးတွေအကြောင်း ဖတ်မိတာမို့ …အားလုံးကိုမျှဝေလိုက်တာပါ။
ရာစုနှစ် ၂ခုစာလောက် ပြုစုပျိုးထောင်ထားတဲ့ ဒီတံဆိပ်တွေနဲ့ ကုမ်မဏီတွေက စကားတွေအများကြီးပြောနေမှာပါ။
အဲဒီအသံကို အမိအရဖမ်းကြပေါ့နော..။ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလည်း ဆွေးနွေးကြပေါ့။
The firm was formed in 1895 by J. Pierpont Morgan, one of the richest men in American history. It had operated before that under different names. The company provided early financing for U.S. Steel and, in 1895, supplied the U.S. government with $62 million in gold to underwriteabond issue to improve that national balance sheet. The firm also provided financing for railroads to aid their expansions in the latter part of the 19th Century. The company was broken into two pieces asaresult of laws established by the Glass-Steagall Act of 1933: JP Morgan—the commercial bank, and Morgan Stanley—the investment house. The commercial bank remained one of the primary banks in the U.S. and eventually became one of the cornerstones of JPMorgan Chase. Morgan Stanley remains one of the most famous investment banks in the U.S. and around the world.
Credit: The Greatest Brands in American History – 24/7 Wall St. http://247wallst.com/2010/08/09/the-greatest-brands-in-american-history/3/#ixzz0wnslqQrz
ကြက်ဆင်တံဆိပ်ဖဲထီးတို့။ ရွှေကျီးနိုင်လွန်တို့ က မြန်မာ ပြည်တွင်းဖြစ် ဟုတ်လို့လား။
အခုလောလောဆယ် မြန်မာပြည်မှာ နာမည်ကြီးတာတွေကတော့
ပဲခူး မနီ ငါးချဉ်
…….. မှတ်မိ သလောက်ပါ။
ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်တုန်းက ပြည်သူပိုင်သိမ်းလိုက်လို့ ပျောက်ကွယ်သွားရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။
အမေရိကရဲ့ အကောင်းဆုံး Brand များလိုပဲ ဆောင်းပါးတစ်စောင် အနေနဲ့ ပြုစု နိုင်ရင် ကောင်းမယ်။